I-Estanconfor Santos ene-Sea View - I-Airbnb
I-Estanconfor Santos ene-Sea View
Santos, São Paulo, i-Brazil
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Théo
Hamba ukusuka ekunethezekeni kwekhaya lakho laseBeach. Indawo eyodwa ukusuka ogwini, ilungele ukubuka indawo ngisho nomsebenzi. Ukuhlanza indlu nsuku zonke, ukwamukela amahora angama-24, usizo lokulungiswa kwansuku zonke, yonke into yenhlalakahle yakho!
Sinekamelo lokulala elinombhede we-Queen nombhede wosofa egumbini lokuphumula, singakwazi ukuhlalisa abantu abangaba ngu-4! I-air conditioning ekamelweni lokulala kanye negumbi lokuhlala.
125Mb/s I-inthanethi ye-WiFi enekhebula le-TV egumbini lokuphumula negumbi lokulala. I-TV yekamelo ine-Chrome Cast ukuze ukwazi ukusebenzisa i-TV njenge-Smart
Inelineni yokulala neyokugeza (ngaphandle kwamathawula olwandle/echibini) kanye nokufinyelela kwe-inthanethi kwe-WiFi engu-125Mb/s kanye ne-cable TV.
Ifulethi elisha, linekhishi elinezitsha ezinkulu. I-balcony ongazipholela kuyo ngemva kosuku olwandle noma emsebenzini (ngokuvalwa kwengilazi/ukuvikela). Amamitha ambalwa ukusuka ekhemisi, amabhikawozi nesitolo esikhulu, njengeSuarloaf Mountain, nezindawo zokudlela.
4.72 · 135 okushiwo abanye
I-Gonzaga iyindawo yendabuko e-Santos lapho iningi lamahhotela, izindawo zokudlela kanye nokunye okukhangayo kutholakala. Siseduze ngokwanele ukuthi singahamba futhi kude ngokwanele ukuze singabi "ku-melee".
Hlola ezinye izinketho ezise- Santos namaphethelo